FAMPAHALALANA SY SARY MAHAZATRA MOMBA NY ALIKA SCHNAUZER - ALIKA
Fampahalalana sy sary mahazatra momba ny alika Schnauzer
Spike ilay Standard Schnauzer mainty amin'ny 2½taona eo amin'ny lahatsorany
Lisitry ny alika mahazatra Schnauzer Mix
Ny Standard Schnauzer dia alika antonony sy efajoro. Toa tsimbadika kely kokoa an'ny Giant Schnauzer . Ny karandoha dia somary malalaka ary mijanona kely. Ny loha dia lava sy mahitsizoro. Mainty ny orona sy ny molotra. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso miendrika oval sy salantsalany dia mainty volontany. Ny sofina dia apetaka ambony amin'ny lohany ary voakiky na voahidy voajanahary. Rehefa voakapa izy ireo dia mijoro mahitsy miaraka amin'ny tendrony maranitra. Rehefa avela voajanahary, ny sofina dia miendrika V, entina manakaiky ny loha. Mahitsy ny lamosina, ary misidina somary midina ilay topline avy any amin'ny malazo ka hatrany amin'ny rofy. Ny tongotra eo aloha dia mahitsy raha jerena amin'ny lafiny rehetra. Ny rambony dia avo avo ary matetika miorim-paka 1-2 sentimetatra (2.5-10 cm.). Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny rambon'ny docking sy ny sofina any amin'ny ankamaroan'ny faritra Eoropa. Azo esorina ny lalàm-panala. Ny tongotra kely dia mifono fantsika mainty. Ny palitao indroa dia manana palitao matevina, matevina, mafy, ivelany misy akanjo lava malemy. Ny volo dia mijoro kely miakatra avy any aoriana, miaraka amin'ny volombava, lava kokoa, volombava, volombava sy volomaso. Ny loko palitao dia tonga mainty sy sira ary dipoavatra.
Ny Standard Schnauzer dia manao alika mpiambina tsara. Izy io dia velona, ​​fa tsy milamina raha omena fanatanjahan-tena ampy. Mafana fo, mahaliana ary be fitiavana, dia mazàna manana ny toetran'ny mpampihorohoro. Mamirapiratra, manan-tsaina ary milalao, ny Schnauzers mahazatra dia mila fiaraha-miasa ary alika tsara hiara-dia aminy. Ity taha ity dia manana taha ambony amin'ny fianarana. Raha ny TOMPON'NY tsy mampiseho fihetsika feno fahatokisan-tena amin'ny fitsipika tsy miova ny alika dia tsy maintsy manaraka ary mametra ny zavatra azon'ny alika sy tsy vitan'ny alika, mety ho fanahy iniana izy, mitaky ary mety manomboka mihetsika tsy matahotra. Mety ho lasa tsy atokisana amin'ny ankizy izy. Mety ho lasa miaro sy manjakazaka tokoa, miambina zavatra, toerana ary olona avy amin'ny olon-kafa . Miaraka amin'ny maha-karazany an'ity mpitarika fonosana , hifanerasera SY fiaran-dalamby tsara izy, ary aza hadino ny mandray azy fitsangatsanganana entana isan'andro mamoaka angovo ara-tsaina sy ara-batana. Ireto alika mavitrika ireto dia mila mavitrika, tompony manjaka , izay manana fahaizana maneho mazava fa izy ireo no lehibeny fa tsy ilay alika ary vonona ny handany fotoana hitazomana tsara.
Haavony: Lehilahy 18 - 20 santimetatra (46 - 51 cm) Vavy 17 - 19 santimetatra (43 - 48 cm)
Milanja: Lehilahy 30 - 45 pounds (14 - 20 kg) Vehivavy 30 - 40 pounds (14 - 18 kg)
Raha ny tokony ho izy, ny haavony dia tokony hitovy amin'ny halavany, ka miteraka fahatsapana somary toradroa.
Ny sasany dia mora voan'ny tsimok'aretina sy fivontosana.
The Standard Schnauzer dia alika tsara amin'ny fiainana an-trano. Mavitrika be izy io ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany.
Ireto alika mavitrika ireto dia hanao fanatanjahan-tena betsaka araka izay tratrany. Isan'andro, lava, haingana MANDEHANA na jog dia tsy maintsy atao. Hahafinaritra azy ireo koa ny fotoana filalaovana mandritra ny fotoana ahafahany mihazakazaka malalaka. Aza atao be loatra amin'ny alika kely anefa, mandra-pahatonga ny vatany ho matanjaka sy ho matotra. Mbola mila mandeha ny pups, elanelana lavitra kokoa fotsiny.
Ankizy 4-8 eo ho eo
Mora ny mijery azy ilay palitao, fa matevina ny akanjo ivelany ary ho lasa matotra izy io raha tsy voakolokolo na miborosy isan'andro amin'ny borosy tariby fohy. Esory ny fatotra ary esory aloha ny voam-bary, avy eo manohitra ny voamaina hampiakarana ny palitao. Ny biby dia tokony hokapohina amin'ny lavany lava in-droa isan-taona - amin'ny lohataona sy amin'ny fararano. Tompona maro no misafidy ny hahay hikarakara ny alikany manokana fa tsy hitondra azy ireo any amin'ny matihanina. Arosoy manodidina ny masonao sy ny sofinao amin'ny hety matevina ary diovy ny volombava aorian'ny sakafo. Tsy manana fofona doggie izy ireo ary tsy mandany volo firy, na dia nilaza aza ny tompona sasany fa nilatsaka ny fenitra arahiny. Raha miahiahy momba ny fandatsahana ianao dia anontanio ny mpiompy raha toa ka ny ray aman-drenin'ny alika no tianao hantsaka.
Ny Standard Schnauzer dia nipoitra avy tany Alemana ary izy no zokiny indrindra amin'ny karazany Schnauzer telo . Nandritra ny taona manodidina ny fiandohan'ny taonjato faha-20, dia samy Pinscher Alemanina malefaka ary Schnauzer volo maditra saribakoly niseho ihany tamin'ireny koa. Ny German Pinscher Schnauzer Club dia nanangana politika mitaky porofon'ny zana-dahatry ny palitao Schnauzer volo maditra ho an'ny fisoratana anarana. Io dia nanampy haingana nametraka karazana ary nahatonga azy ho karazany miavaka amin'ny Pinscher Alemanina . Ireo Schnauzers ireo dia nomena anarana hoe Standard Schnauzer. Ny anarana Schnauzer dia nalaina avy amin'ny teny alemà 'Schnauze,' izay midika hoe 'molotra.' Ny alika dia niasa toy ny alika mpitondra hafatra tamin'ny Ady Lehibe I ary mpihaza verin, mpiambina marin-toerana, mpiambina biby fiompy ary mpamaky. Mpanakanto eropeana maromaro no nampiseho an'io karazana sary hosodoko io, toa an-dry Rembrandt sy Durer, izay tompon'ny Standard Schnauzers. Ny sasany amin'ireo talentan'ny Standard Schnauzer dia misy: mihaza, manara-dia, mamerina, mpiambina, miambina, miasa miaramila, mailaka, mankatoa mpifaninana ary manao tetika.
Terrier, AKC Miasa
Spike ny Standard Schnauzer mipetraka eo amin'ny zaridaina tulip
Mandrosoa ny Standard Schnauzer miaraka amin'ity orona ity mankamin'ny tany manara-maso zavatra mahaliana
Spike ny Standard Schnauzer amin'ny 13 volana eo amin'ny fijeriny
Spike ny Standard Schnauzer mandritra ny 13 volana
Spike ny Standard Schnauzer amin'ny maha alika azy mandritra ny 6 volana amin'ny fijerena azy
Sary natolotry ny Prairie Ranch
omby terrier afangaro amin'ny pitbull
Schnauzer mahazatra an'ny olon-dehibe an-tsambo
Jesse the Standard Schnauzer amin'ny faha-9 taonany
Elsie ilay alika kely Schnauzer Standard amin'ny 5 herinandro
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Standard Schnauzer
Sary Schnauzer mahazatra 1
alika kely amboahaolo amboadia terra
ohatrinona ny haben'ny poodles mahazatra
yorkie sy mini pincher mifangaro
sy fotsy volo husky alika